အောင်ခင်မြင့် | လမ်းအိုလေး
Tag Archives: အောင်ခင်မြင့်
ဟယ်လို မြို့မငြိမ်း (အောင်ခင်မြင့်)
တံခါးများ ပိတ်﻿﻿နေပါပြီဆိုတဲ့ ခံစားချက်﻿မဲ့ ﻿ကြေငြာသံ
ရထားပလက်﻿﻿ဖောင်း အဟထဲ ပန်းတစ်﻿ပွင့်﻿ ပြုတ်﻿ကျသွား
ခု မ﻿ပြောလည်း ﻿နောက်﻿ ﻿ပြောရမယ့်﻿ စကားများ ရင်﻿ထဲမှာ
အထပ်﻿မြင့်﻿ တိုက်﻿များဆီမှ လွင့်﻿ကျလာ﻿သော အင်္ကျီများ
မှိုင်းညို့မှုထဲ ﻿တောင်﻿﻿ဝှေးနဲ့ ﻿ထောက်﻿ရင်း စမ်းရင်း သွားခဲ့
လူဟာ ﻿ချောကလက်﻿ကြီးအဖြစ်﻿ သရုပ်﻿﻿ဆောင်﻿ရတဲ့ ကမ္ဘာ
ခြ﻿င်္သေ့ကြီးက အရှိန်﻿နဲ့လာ﻿နေတဲ့ ရထား﻿ရှေ့မှာ ရပ်﻿ခဲ့
﻿သေခြင်းဟာ ﻿ပေါက်﻿﻿ပေါက်﻿ဆုပ်﻿များပမာ ချိုချို﻿မွှေး﻿မွှေး
ငါ﻿ ခေါ်ဆို﻿နေ﻿သော ဖုန်းဟာ ဘယ်﻿သူ့ထံမှာ မြည်﻿﻿နေတာ
Text: Aung Khin Myint (2017)
Image: Aung Khin Myint: Recycled Meanings (2011)
Categories: Kabyarz | Tags: Aung Khin Myint, အောင်ခင်မြင့်, Kabyarz | Permalink.
နိုင်﻿ငံ﻿တော်﻿သီချင်း ၁ (﻿အောင်﻿ခင်﻿မြင့်﻿)
ဂိုယာရဲ့ black paintings ﻿တွေထဲက အ﻿မှောင်﻿မိုက်﻿ဆုံးက﻿တော့ သူ့သားသူ ပြန်﻿﻿စား﻿နေတဲ့​﻿စေတန်﻿ (Satan devouring his son) ဆိုတဲ့ လက်﻿ရာပဲ။ အဲဒီမှာ ﻿တွေ့ရတဲ့ အနိဌာရုံရဲ့ ကဗျာ﻿ဗေဒ (the poetics of horror) နဲ့ အခု ဒီကဗျာစီးရီးကို ငါ﻿ရေးတယ်﻿။ တကယ်﻿က နတ်﻿မိစ္ဆာတစ်﻿ပါးဟာ ညစဉ်﻿ ငါ့﻿ခေါင်းထဲက﻿နေ နှုတ်﻿တိုက်﻿ချ﻿ပေးခဲ့တာ။ ငါက အလွယ်﻿တကူ လိုက်﻿ကူးရုံမျှ။
ငါ့ကဗျာဟာ ﻿မှောင်﻿မိုက်﻿တယ်﻿။ ﻿ကဗျာတစ်﻿ပုဒ်﻿ချင်းဟာ ﻿ထောင်﻿အခန်း တစ်﻿ခုစီပမာ။ မတ္တာဖာတွေ​ကိုလည်း ညှဉ်းပမ်း​နှိပ်﻿စက်﻿တဲ့ ကိရိယာ﻿များလို ငါသုံးခဲ့တယ်﻿။
သမိုင်းနဲ့ မှတ်ဥာဏ်ဟာ လိင်ဆက်ဆံနေကြ။ အမှောင်ထဲမှာ ညည်းညူသံများ။ ရယ်သံများ။ ငိုသံများ။
နိုင်ငံတော်သီချင်းဟာ ဟိုအဝေးမှာ မသဲမကွဲ။
﻿နောက်﻿﻿ခြေဖြင့်﻿ ယက်﻿ထုတ်﻿﻿သော သဲတို့ဖြင့်﻿
သင်﻿၏ သစ္စာမရှိ﻿သော နိုင်﻿ငံ﻿တော်﻿။
(နိုင်﻿ငံ﻿တော်﻿သီချင်း – ﻿အောင်﻿ခင်﻿မြင့်﻿။ ﻿မေ၊ ၂၀၁၅ – ပထမ စာအုပ်﻿တိုက်။)
Categories: Kabyarz | Tags: Aung Khin Myint, အောင်ခင်မြင့်, Kabyarz, National Anthem | Permalink.
နိုင်﻿ငံ﻿တော်﻿သီချင်း ၁၁ (﻿အောင်﻿ခင်﻿မြင့်﻿)
မပွင့်﻿ခင်﻿ ညှိုး﻿ခြောက်﻿သွား﻿စေတဲ့ ရာသီဥတု
သိမ်းငှက်﻿﻿တွေဟာ မ﻿မျှော်﻿လင့်﻿တဲ့ အချိန်﻿မှာ
အချစ်﻿ရူးမ﻿လေးတို့ရဲ့ ﻿မေတ္တာကမ္ဘာ Continue reading →
နိုင်﻿ငံ﻿တော်﻿သီချင်း ၂၆ (﻿အောင်﻿ခင်﻿မြင့်﻿)
ဗုံးဆန်﻿ကြီးများဟာ ﻿လေထဲမှာ ခဏရပ်﻿တန့်﻿ပြီး
တရားဓမ္မများ﻿တောင်﻿ နာယူလိုက်﻿﻿သေးရဲ့ Continue reading →
နိုင်﻿ငံ﻿တော်﻿သီချင်း ၃၆ (﻿အောင်﻿ခင်﻿မြင့်﻿)
တစ်﻿ညမှာ ငါ အထိတ်﻿တလန့်﻿သိခဲ့ရ
အဝတ်﻿မပါပဲ အ﻿မှောင်﻿ထဲမှာရပ်﻿ရင်း သူမဟာ
ငါ့အ﻿ကြောင်း﻿တွေကို နိုင်﻿ငံ﻿တော်﻿ဆီ သတင်းပို့﻿နေခဲ့
သူမဟာ ငါ့ဘဝထဲ ဝင်﻿﻿ရောက်﻿﻿နေထိုင်﻿ဖို့
နိုင်﻿ငံ﻿တော်﻿က တာဝန်﻿﻿ပေးခဲ့တဲ့ undercover
သူမက ငါ့ကို ﻿သေနတ်﻿နဲ့ ချိန်﻿ရွယ်﻿ထားတယ်﻿
﻿နောက်﻿ တိပ်﻿﻿ခွေ﻿တွေ တစ်﻿﻿ခွေပြီးတစ်﻿﻿ခွေ ဖွင့်﻿ပြတယ်﻿ Continue reading →
နိုင်﻿ငံ﻿တော်﻿သီချင်း ၄၂ (﻿အောင်﻿ခင်﻿မြင့်﻿)
ဇာတ်﻿﻿ကြောင်းပြန်﻿သူကို ငါ ကြိုးနဲ့တုပ်﻿
သူ့ပါးစပ်﻿﻿ကို တိပ်﻿﻿တွေနဲ့ ကပ်﻿ထားလိုက်﻿တယ်﻿
မနက်﻿ဆို ငါ့အ﻿မေရဲ့ ကြာနီကန်﻿
ညဆို ငါ့အ﻿ဖေရဲ့ အာမီရမ်﻿
ဝတ်﻿ရွတ်﻿သံများနဲ့ ငါတို့ အိပ်﻿ရာဝင်﻿ခဲ့ပြီး
﻿သေနတ်﻿သံများနဲ့ ငါတို့ လန့်﻿နိုးခဲ့ပါတယ်﻿
အစိုးရ﻿ရောင်းတဲ့ ဆီးထုပ်﻿တံဆိပ်﻿ Continue reading →
ကပ္ပတိန်စပါးရိုး၏ ဖွင့်ဟချက်များ – ၁ (အောင်ခင်မြင့်)
ခြောက်နှစ်သား အရွယ်က ငါလွှတ်ခဲ့တဲ့ စက္ကူသင်္ဘောလေးဟာ
နှစ်ပေါင်း သုံးဆယ်ကျော် ကြာတဲ့အခါမှာ
တစ္ဆေသင်္ဘောအဖြစ် ငါ့ဆီ ပြန်လည် ရောက်ရှိခဲ့။
ရေပေါ်မှာ ပေါလောမျောနေတဲ့ ဇင်ယော်ငှက်အသေတွေလို။
ငါတို့မျိုးဆက် ဟာ မရှိတဲ့ ရတနာ နောက်ကိုလိုက်နေကြတဲ့
မျက်စိတစ်ဖက်လပ် ပင်လယ်ဓားပြတွေ ဖြစ်တယ်။
ကမ္ဘာမကြေ သီချင်းကို မျက်စိစုံမှိတ်ပြီး သီဆိုနေတဲ့ကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်။
ပြီးတော့ စောစောမှောင်တဲ့ ညတွေ။
ပြီးတော့ မမိတချက် မိတချက် ရေဒီယိုသံတွေ။
အဲဒါတွေပြီးတော့ တရကြမ်း တိုက်ခတ်တဲ့ လေ။ Continue reading →
Categories: Kabyarz | Tags: Aung Khin Myint, ကဗျာလောက, အောင်ခင်မြင့်, Kabyarz | Permalink.